Weerar ka dhacay Magaalada London – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Weerar ka dhacay Magaalada London
Tuuryare 29 March 2019
Weerarkaan ka dhacay masjidka ku yaalla London ayaa yimid kadib markii Nin uu Nin kale tooreey ku dilay, kadibna uu goobta ka baxsaday.
Booliska lodon ayaa baacsanaya Ninka falka ka geystay masaajidka Reben Park ee bartamaha London,waxana ninka uu tooreeyey da’diisa lagu qiyaasay ilaa 20 jir
Nin lagu magacaabo Bahir Mowlana ,isla markana goobjooge ahaa ayaa sheegay in uu arkayay booliiska oo xiray labo qof oo masaajidka ku sugnaa weerarka kadib.
Sarkaal u hadlay Booliska howlgalka wada ayaa waxaa uu sheegay in weli aysan cidna u qaban weerarkaas,isla markaana uusan aheyn mid waxa loogu yeero argagaxisada.
Diyaaradaha qumaatiga u kaca ayaa dul meereysanayay masaajidka, iyada oo dusha laga eegayay qofkii meesha ka baxsaday.
Weerarka dhacay masjid ku yaalla Magalada lodon ayaa kusoo aadaya dhowr todobaad kadib markii weerar dad badan oo muslimiin ah lagu dilay uu ka dhacay Masjid ku yaalla Magaalo ka tirsan dalka New Zealand.
Xildhibaan ka hadlay Amaanka Muqdisho
Latest Updates on IOM operation in Somalia